Indlela yokuSusa okungapheliyo Windows 10 Hlaziya iLoop
Ukuba ubambekile kwilogo engapheliyo uzama ukulayisha Windows 10 uhlaziyo, awunakuba wedwa. Kufana nokubukela i-PC ibetha intloko yayo eludongeni, iphindaphindwe kwaye iphindaphindwe.
Ngamanye amaxesha uhlaziyo olongezelekayo luyasilela. Ubona umyalezo usithi ukufakela akuphumelelanga okanye ezinye zilandelwe ngokutshintsha utshintsho. Xa inkqubo yakho ibuyela ebomini iyure enye okanye ezimbini okanye ezintlanu okanye ezintandathu kamva, ibuyela umva ekuzameni ukufaka uhlaziyo olufanayo lobuyatha. Ufumana impazamo efanayo. Hlamba, hlamba, phinda.
Unokufuna ukuvumela inkqubo yakho ukuba ihambe kumjikelezo opheleleyo wokuzibulala, ukuze ubone ukuba unethamsanqa, kodwa emva koko kubuhlungu kakhulu. Kuya kufuneka ubeke Windows 10 kububi bayo.
Ngethamsanqa, iMicrosoft inesixhobo esixelela uHlaziyo lweWindows yeWindows ukuba iyeke ukukhangela uhlaziyo oluthile oluqokelelweyo olubangela iingxaki. Isixhobo asakhelwanga ukumisa uhlaziyo oluqokelelweyo olufileyo kwiindlela zabo, kodwa kuyasebenza nangona kunjalo.
Nantsi indlela yokuyisebenzisa:
Yiya e KB 3073930 kwaye ukhuphele isixhobo sikaMicrosoft seWushowhide. Cofa kwikhonkco eliphawulwe Khuphela i-'Bonisa okanye ufihle uhlaziyo 'kwiphakheji yokusombulula ingxaki ngoku. Tsala ifayile ekhutshelweyo, wushowhide.diagcab, uye nakweyiphi na indawo efanelekileyo.
Cofa kabini kwi-wushowhide.diagcab ukuze uyiqhube.
Eli candelo libalulekile kwaye kulula ukuliphosa: Cofa kwikhonkco eliPhambili. Sukukhetha i Faka iZilungiso ngokuzenzekelayo ukhetho. Cofa Okulandelayo.
Ukufumana i-wushowhide ukufihla uhlaziyo, yiya kukhetho oluPhucukileyo kwaye ucime iiNkqubo zokuLungisa ngokuzenzekelayo.
Lindela i-Wushowhide ukukhangela lonke uhlaziyo olulindelekileyo kwinkqubo yakho. Xa isiza phezulu emoyeni, cofa Fihla uHlaziyo.
Kuya kubakho ibhokisi ephawulwe ngoHlaziyo oluQokelelweyo lwe Windows 10 Inguqulelo 1607 yeX64 esekwe (okanye x-32 esekwe) kwiinkqubo (KB xxxxxxx) okanye into efanayo. Ukuba unomdla wokuba uyifumene na iwight wascally wabbit, jonga kwi-Win10 yeMicrosoft hlaziya ingxelo yelog Thelekisa amanani e-KB.
Khetha ukhetho loHlaziyo oluQokelelweyo lwamva nje, cofa Okulandelayo, kwaye uvale ngaphandle kwewhowhide. IiWindows zifihla uhlaziyo lwakho. Inkqubo yoHlaziyo lweWindows ayizukubona uhlaziyo ngaphandle kokuba ulutyhile ngokungqalileyo.
Ukuba usifumene isisombululo sengxaki yakho kwaye ufuna ukufaka kwakhona uhlaziyo olongezayo, zama oku:
Sukukhetha i Faka iZilungiso ngokuzenzekelayo ukhetho. Cofa Okulandelayo. Lindela i-wushowhide ukukhangela lonke uhlaziyo olulindelekileyo kwinkqubo yakho.
Xa i-wushowhide inyukela emoyeni, cofa ubonise uHlaziyo olufihliweyo.
Khetha ibhokisi ephawulwe ngoHlaziyo oluQokelelweyo lwe Windows 10 Inguqulelo 1607 yeenkqubo ezisekwe kwi-x64 (okanye ezisekwe x32) emva koko ucofe ulandelayo. Oku kuyothusa, kodwa i-wushowhide iya kukuxelela ukuba ilungise iingxaki ezifunyenweyo.
Cofa Vala. Oko kuya kukutyhila uhlaziyo obulufihlile ngaphambili.
Okwangoku, ungabuyela kuHlaziyo lweWindows (Qala, useto, uHlaziyo kunye noKhuseleko, Jonga uHlaziyo). IiWindows ziya kufumana uhlaziyo oluqokelelweyo kwaye zikufakele.
Nangona uhlaziyo oluqokelelweyo luhlala luqukethe uhlaziyo lokhuseleko, ngamanye amaxesha kuya kufuneka ubeke uHlaziyo lweWindows lweWindows kububi bayo.
Rhoqo, inombolo yempazamo engu-0x80070020 ihamba nokuhlaziywa kokungafakwanga kokuhlaziywa kunye nokubuyela umva. Rhoqo, ilandelwa lelinye ilinge lokufaka uhlaziyo olongezelekayo, kunye nolunye ukusilela, kunye nekhowudi efanayo yempazamo.
Nje ukuba ubuyele ezinyaweni zakho, kuya kufuneka uzame ukufumanisa ukuba kukho naziphi na iifayile zakho ezivaliweyo. (Impazamo 0x80070020 ngokubanzi kuthetha ukuba ifayile eyayifuneka yayitshixiwe.) Izityholo eziqhelekileyo zibandakanya ukonakala kweefayile zenkqubo yeWindows, iinkqubo zeantivirus kunye nabaqhubi bevidiyo.
Uluhlu lokutya oluphezulu lwe potassium
Yeyiphi milligrams engena valium
ip 145 ipilisi emhlophe
Ivakala ngathi yinto ephantsi kwembambo yokunene
Isebenza njani iMicrosoft onedrive
Uvithamini d davis pdf